Ikea na-agbakwụnye AirPlay 2 na Symfonisk akwụkwọ nkwakọba okwu | esi m na mac
Ikea na-agbakwunye AirPlay 2 na ndị na-ekwu okwu ụlọ akwụkwọ Symfonisk
Oge ụfọdụ gara aga, ụlọ ọrụ Swedish Ikea wepụtara ndị na-ekwu okwu nhazi ụlọ akwụkwọ yana Sonos siri ike. Mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ abụọ a bụ ihe a na-ahụkarị ma ọ dị ka oge a emelitere ime nke ọkà okwu na ihe ndị ahụ mee ka ọ dakọtara na AirPlay 2, na mgbakwunye na ịgbakwunye ọtụtụ obere mmelite.
Ikea Ọ bụ Ingvar Kamprad ji aka mebere ya na 1943 wee malite dị ka azụmahịa katalọgụ n'ime oke ọhịa nke Älmhult na Sweden. Taa, ọ bụ akara zuru ụwa ọnụ nke ngwaahịa ụlọ nke na-eweta ego, imewe na ọnụ ahịa dị mma. Ụfọdụ ngwaahịa dị ka oriọna ndị a dakọtara na Apple AirPlay ekele maka mmekorita ya na ụlọ ọrụ Sonos, ụlọ ọrụ raara onwe ya nye naanị maka ụda.
Ọkà okwu ụlọ akwụkwọ ugbu a bụ AirPlay 2 dakọtara
Ndị na-ekwu okwu ụlọ akwụkwọ emegharịrị ewepụtara na-egosi otu nhazi na ọdịdị n'ozuzu ya dị ka ụdị nke mbụ, mana nwee ihe nrụpụta emelitere, ebe nchekwa agbakwunyere, yana ike kacha mma mgbe ịnọ na ọnọdụ njikere, dị ka webụsaịtị teknụzụ Dutch si kwuo Tweakers. N'ihi nke a, ha na-agbakwụnye ndakọrịta na AirPlay 2.
Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ndị ọkà okwu ewepụtara n'oge 2019 na, dị ka nke Ekpughere ndị ọkà okwu Symfonisk izizi na 2019, ọgbọ ọhụrụ a dị na oji na ọcha. Ọ na-ejigide nkwado maka netwọk Wi-Fi 2,4GHz na 5GHz. Na Septemba 2021, Ikea mekwara oriọna Symfonisk ya na mgbanwe ndị yiri ya na ọkà okwu ụlọ akwụkwọ a.
Ugbu a ụdị ọhụrụ dị na Netherlands, mana amabeghị mgbe ha ga-adị n'ụwa niile. Ọgbọ ọhụrụ nke oriọna ahụ, nke bụkwa AirPlay 2 dakọtara, gosipụtara mgbanwe mgbanwe ụfọdụ, nhọrọ nhazi nke ukwuu, yana ahụmịhe ụda ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » Ikea na-agbakwunye AirPlay 2 na ndị na-ekwu okwu ụlọ akwụkwọ Symfonisk
Ah, yabụ ndị ga-adaba na AirPlay 2 bụ ụdị ọhụrụ nke ndị na-ekwu okwu Symfonisk (nke a na-erebeghị na Spain), ọ bụghị ndị dị ugbu a! Ọfọn, ma eleghị anya, ị nwere ike dokwuo anya nke a na isiokwu, n'ihi na ọ dị ka ọ na-ekwu ihe ọzọ (n'ihi na ihe o yiri ka ọ na-ekwu bụ na ugbu a ọrụ ga-enwe ike ịnụ ụtọ AirPlay 2)
Ọ dị mma ịwụnye mmelite kachasị ọhụrụ maka macOS Big Sur na Monterey
HomePod mini na-abịa n'obodo ndị ọzọ n'oge adịghị anya